कक्षा १० पछि २० प्रतिशत विद्यार्थी गायब : खोज्ने कसले ? — Bhaktapurpost.com
कक्षा १० पछि २० प्रतिशत विद्यार्थी गायब : खोज्ने कसले ?
इभक्तपुर संवाददाताभक्तपुर, ५ चैत
भक्तपुर, ५ चैत
सरकारले दुई वर्षदेखि कक्षा १० मा अनुत्तीर्ण हुने प्रणाली खारेज गरेर ग्रेडिङबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गर्‍यो ।
प्राविधिक धार अध्ययन गर्नेमा भने छात्र बढी छन् । नियन्त्रक रेग्मीका अनुसार यस वर्ष प्राविधिक धारबाट एसईई दिने ८ हजार ७ सय ३४ विद्यार्थीमध्ये छात्र ५ हजार ३ सय र छात्रा ३ हजार ३ सय छन् । गत वर्षको तथ्यांक पनि यस्तै छ । गत वर्ष ३ हजार ६ सय ५७ जनाले परीक्षा दिएकोमा २ हजार २ सय छात्र, १ हजार ४ सय छात्रा थिए । कान्तिपुरबाट